Ama-FAQs - I-Shenzhen Xinyuanjiaye Technology Co, Ltd.
Amanani ethu angashintsha ngokuhambisana nokunikezwa nezinye izinto zemakethe. Sizokuthumelela uhlu lwamanani abuyekeziwe ngemuva kokuthi inkampani yakho ixhumana nathi ukuthola eminye imininingwane.
Yebo, sihlala sisebenzisa ukupakisha kwekhwalithi ephezulu. Siphinde sisebenzise ukupakisha okuyingozi okhethekile wempahla eyingozi nabathuthi abaqinisekisiwe besitoreji sokubandayo sezinto ezibandayo zokushisa. Ukupakelwa kochwepheshe nezidingo zokupakisha ezingezona ezejwayelekile zingase zithole imali eyengeziwe.